Ciidamada Amaanka Muqdisho oo gacanta ku dhigay In kabadan 60-mooto Bajaaj. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho ku soo qab qabtay Mooto Bajaaj ka badan ilaa iyo Lixdan mooto Bajaaj, iyadoona ciidamada amaanka ay ku soo bandhigeen Saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Ciidamada amaanka ayaa Mootooyinka la soo bandhigay waxaa ay ku sheegeen in ay ahaayeen kuwo Taargo la’aan ah, laguna tuhmayay in ay qeyb ka yihiin falalka abuura amni darada ee ka dhacayay magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobo ayaa ka hadlay Saldhiga degmada uu maamula ee lagu soo bandhigay Mootooyinkaasi, wuxuuna tilmaamay in talaabadaan ay tahay mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada.
Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed C/laahi Maxamed (Tuulax) oo goobta joogay ayaa sheegay in aan loo dul qaadan doonaan mootooyin socda xiliga habeenkii iyagoo aan wadanin Taarko.
Nin la tuhmayo inuu yahay Daacish oo ay qabteen laamaha Amaanka.